अनसनकारी केसीको विरोधमा हजारौ सडकमा - Health Today Nepal
अनसनकारी केसीको विरोधमा हजारौ सडकमा
July 17th, 2016 समाचार0comments
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पटक पटक अनसन बसेर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनाउँदै आइरहेका डा. गोविन्द केसीको विरोधमा मेडिकल कलेज सञ्चालक, चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी, कर्मचारी, चिकित्सक र सर्वसाधारण सडकमा ओर्लिएर प्रदर्शन
गरेका छन् । केसीले अनसनका बलमा स्वदेशी मेडिकल कलेजहरुको सिट घटाएर नेपाली विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश पठाउन सहयोग गरेको, छात्रवृतिका कोटा कटौती गराएको, अस्पतालमा पटक पटक अनसन बसेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको सेवा प्रभावित बनाएको र चिकित्सा सेवालाई नै जनतामाझ बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै आईतबार उनीहरुले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोधसभा गरेका छन् । नेपाल मेडिकल एवं डेन्टल कलेज एसोसिएसनको नेतृत्वमा भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएको विरोध जुलुस मण्डलामा आएर सभाका परिणत भएको थियो । सभालाई सम्भोधन नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले केसी नेपालको चिकित्सा क्षेत्र तहसनहस पार्न कसैको गोटीको रुपमा प्रयोग भइरहेको बताए ।
निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द गराएर नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउने प्रपन्चका साथ अनसनका श्रृखला चलिरहेको उनको बताए । सभामा प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज सहित मेडिकल कलेज सञ्चालक, चिकित्सक र विद्यार्थीहरुले पनि अनसन बन्द गर्नु पर्ने बताए । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग सहित गत एक हप्तादेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसन बसिरहेका केसीका पक्षमा यो पटक समर्थन घट्दै गइरहेको छ । नेपाल चिकित्सक संघले समेत उनका मागमा बिगत जस्तै समर्थन गर्न नसकिने विज्ञप्ति मार्फत जनाइसकेको छ । शनिबार केसीका पक्षमा उनका समर्थक विद्यार्थीले जुलुस निकालेका थिए ।
सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि अल्पमतमा परेकोले सरकारले उनका माग संवोधन गर्न नसक्ने भएकोले केसीले अनसन अन्त गर्नुको विकल्प नरहेको विज्ञहरुले बताएका छन । पटक पटक अनसन बस्दै माग पुरा गराउदै आएका केसीका विपक्षमा पहिलो पटक राजधानीमा विरोध जुलुस निकालिएको हो ।
Previous article निजीमा सरकारी डाक्टरहरुले सुरु गरे मिर्गौला प्रत्यारोपण
Next article एनजिओ धम्क्याउदै पैसा असुल्ने खेलमा सिपी मैनाली